परिवारले आफ्नो प्रेम अस्विकार गरेपछी प्रेमी र प्रेमिकाले बनाए कल्पनै गर्न नसकिने योजना ! – List Khabar
Home / समाचार / परिवारले आफ्नो प्रेम अस्विकार गरेपछी प्रेमी र प्रेमिकाले बनाए कल्पनै गर्न नसकिने योजना !
admin August 22, 2021 समाचार Leaveacomment 75 Views
एजेन्सी । परिवारका सदस्यहरु उनीहरुको प्रेम स्वीकार गर्न मानेनन् । अभिभावकले विवाह गर्न नदिएपछि प्रेमी र प्रेमिकाले यस्तो योजना बनाए जसका कारण प्रेमीका अस्पताल पुग्नु परेको छ । प्रेमिकाले आफैले अनुहारमा ए सि ड हान्न लगाइन् । आफ्नो अनुहारमा क्ष ती भएपछि परिवारका सदस्यले प्रेमीसंग विवाह गराइदिन्छन् भन्ने उनीहरुलाई लाग्यो । यो घटना भारत बिहारको नालंदा जिल्लाको हो।
नालंदाको लाहेरी पुलिस स्टेशन क्षेत्रको सर्किट हाउस नजिकै दिउँसोमै युवती माथि यस्तो घटना भएको खबर सार्वजनिक भयो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा युवतीको प्रेमी सहित ५ जना पक्राउ परे । त्यसपछि घटनाको रहस्य खुलेको हो ।
यस कारण युवती उनको प्रेमी मिलेर यस्तो योजना बनाएका थिए । युवतीमा नै कमजोरी भएपछि आमाबुवा विवाह गरिदिन राजि हुन्छन् भन्ने उनीहरुलाई लागेको थियो । सीसीटीभी क्यामेरामा उनीहरुको यो सबै घटना रेकर्ड भएको थियो । जसमा देखिन्छ की दुई युवती कतै पहाडतिरको वाटोमा जाँदैछन् । त्यहीवेला अर्को तर्फवाट दुई युवक आउँछन् र जगमा भएको ए सि ड युवती तर्फ फ्याक्छन् ।
Previous दश महिने शिशु अ’पह’रण गरी बेपत्ता पारेका अभियोगमा पक्राउ
Next कुन उमेरमा, कुन समयमा महिलालाई बढी ‘यौ’,न चाहाना हुन्छ होला